“DUQSIGA ELEKTARONIKADA”: COL DUULLAAN KU AH DOWLADNIMADA! Qalinkii Ashkir Nur – Radio Daljir
“DUQSIGA ELEKTARONIKADA”: COL DUULLAAN KU AH DOWLADNIMADA! Qalinkii Ashkir Nur
Febraayo 15, 2020 2:59 g 0
Hoggaanka aan kalsoonida buuxda isku qabin, wuxuu had iyo jeer door-bidaa adeegsiga “barobagandada” iyo dacaayadaha aan sal iyo raadka toonna lahayn. Haddaan soo xooriyo ujeeddada guud ee barobaganda, waxay ku soo aruuraysaa in shacabka la marrin-habaabiyo, xog aan dhammaystirneenna la siiyo, sidii la rabana xogta loogu sheego, waana sida ay dowladda Federal-ka Soomaaliyeed imminkaba ku dhaqanto. Horeyna waxay taariikhdu xustaa in madaxweynihii Mareykanka ee Woodrow Wilson uu adeegsaday saxafi caan ahaa oo la oran jiray George Creel si uu u marin- habaabiyo shacabka Mareykanka oo diidanaa ka qayb-galka dalkooda ee dagaalkii koowaad ee dunida (1914-1918).
Maqaalo Kale 255 Siyaasadda & Dhaqaalaha 470 Wararka 18833
Dowladda Suuriya oo weerar ku qaaday Mucaaradka (daawo)